Boxoffice Update: Filimada Padmaavat – Pad Man – Aiyaary ganacsigooda halka uu maraayo – Filimside.net
March 2, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: March 2, 2018
Deepika Padukone, Shahid Kapoor iyo Ranveer Singh filimkooda Padmaavat ayaa keenay 6 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa shanaad waana ganacsi aad u sareeyo asigoo noqday filimka lixaad ee taariikh ahaan lacagaha ugu badan todobaadkiisa shanaad soo xareeyo.
Padmaavat ganacsigiisa mudo shan todobaad ah wuxuu marayaa 276 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday tiyaataradana wuu sii saarnaan doonaa labada todobaad ee nagu soo fool leh waxayna u badan tahay in ganacsigiisa guddaha Hindiya ku istaagi doono 280 Crore (Trade Figure).
Padmaavat saami ahaan kooxda cajaladaha qeybiyaan waxay ka heleen 130 Crore gudaha Hindiya halka suuqyada caalamka lacagaha laga helay iyo xuquuqda Satelite-ka filimkaan laga helay marka lagu sii daro daqliga guud ee kooxda filimkaan soo galay wuxuu gaarayaa 300 Crore.
Taasi oo ka dhigan Padmaavat oo lagu qarash gareeyay 215 Crore in kooxda iska leh filimkaan ka heleen 185 Crore faa’iido ah waana lacag aad u badan sidoo kalena dhibaato walbo uu filimkan la kulmay iyo macaashka guud ee heleen iskuma dhigmaan!
Kaliya waxaan BOI ka sugeynaa inay ku dhawaaqaan in Padmaavat Blockbuster yahay weyna u badan tahay inuu Blockbuster noqon doono.
Dhinaca kale filimka Aiyaary oo ay hogaamiyaal ka yihiin Sidharth Malhotra iyo Monaj Bajpayee ayaa bur buray ganacsi ahaan wuxuuna todobaadkiisa labaad keenay 1.25 Crore sidoo kalena wadarta guud mudo labo todobaad wuxuu marayaa 17.50 Crore (Trade Figure) gabi ahaanba tiyaatarada waa laga dajiyay filimkan ganacsigiisana masii socon doono.
Ugu dambeyntii Superstar Akshay Kumar filimkiisa PadMan isagana wuxuu keenay todobaadkiisa sedexaad 3.25 Crore ilaa 3.50 Crore ganacsi u dhaxeeyo wuxuuna mudo sedex todobaad ah keenay 79 Crore (Trade Figure).
Padman oo noqday filim guuleestay wuxuu cimri ahaantiisa ku istaagi doonaa 80 Crore (Trade Figure) madaama daawadayaashiisa sii yaraanayaan sidoo kalena tiyaatarada inta badan lagala wareegay.
Waxaa Aqrisay 665
Hada hit miyaa padman sxb
Maya waa filim guuleestay Semi Hit noqonaayo